Amaphephandaba adinga ukucabanga ... | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 5, 2006 NgoLwesibili, Septhemba 5, 2006 Douglas Karr
Kusuka kwaSeth blog namuhla maqondana ne esihlokweni ku-Editor and Publisher mayelana nemibono kaGodin evela ku- Encane yiNew Big nokuthi zisebenza kanjani eMbonini Yezindaba.
Izinkampani eziningi ezibheke ukuzithuthukisa zizokwenza ukuhlaziywa kwe-SWOT ngokuziqhathanisa nomncintiswano wazo. Inkinga ukuthi abezindaba 'basendaweni' benze umsebenzi omuhle wokungayinaki i-Intanethi njengosongo isikhathi eside. Kwaze kwaba yilapho amaphephandaba enikeza imali ehlukanisiwe ku-Craig's List nase-eBay lapho abathola ukuthi le nto ye-Interweb ibilokhu izosala. Kepha kusamele baguqule imisipha yabo yesifunda futhi basebenzise ithuba lokuthi bakuphi.
I-SWOT = (S) trengths, (W) ama-eaknesses, (O) amathuba, (T) izinsongo
Kunezici ezintathu ezibalulekile iphephandaba elinalo ngokuncintisana kwalo kwe-Intanethi: ukumbozwa kwendawo, ukusatshalaliswa kwendawo kanye nezinsiza zendawo. Ngabe ubona okuthile okufana lapho? Okwasendaweni, okwasendaweni, okwendawo !!! Lezi yizinto ezi-3 okufanele ziguqulwe zibe yizinzuzo zokuncintisana ngobusuku obubodwa! Ngichithe iminyaka engaphezu kweyishumi embonini yamaphephandaba ngikhala phezulu kwamaphaphu ami ukuthi sidinga ukusebenzisa amandla ethu ukusebenzisa amathuba okuba sendaweni. Kwakusezindlebeni ezingezwa.
Okusemqoka wukuthi imboni yamaphephandaba iyimboni yezihlobo. Abaholi bayo bafundisiwe ngaphakathi embonini futhi akuvamile ukuthi ishiye umkhakha ube ngamathalente. Imboni ye-Intanethi, ngakolunye uhlangothi, isiqongelele ithalente ezimbonini eziningi - okubandakanya i-Newspapers (moi).
Anginaso isiqiniseko sokuthi ukhiye ukuthi amaphephandaba adinga ukucabanga okuncane, ngikholelwa ngokweqiniso ukuthi adinga ukusizakala kuphela ngomehluko anawo njengebhizinisi lesifunda. Futhi, ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi esiphezulu sokuthi baqale ukubheka ngaphandle kwezindonga zabo ezine ukudonsa ithalente. Abantu abakade bekhona isikhathi sokuphila konke abakwenzi okuhle kakhulu.
May 1, 2009 ku-4: 31 PM
Lelo iphuzu elihle impela - ushintsho luhlala lubekelwa inselelo!